It is me. Ko Niknayman.: ပြည်သူ့ တာဝန် (၉) ရပ်။
၆။ ငါတို့သည် နအဖ နှင့် အဆက်အနွယ်များပိုင်ဆိုင်များတွင်ဈေးမ၀ယ်တော့ပါ။ နအဖ နှင့် အဆက်အနွယ်များ
ပိုင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို မစားသုံးတော့ပါ။
၈။ ငါတို့သည် နအဖ နှင့် အဆက်အနွယ်များအား သူတို့နှင့်ထိုက်တန်သည့်အတိုင်း ဆက်ဆံရမည်။ အရေးတ
ယူ မဆက်ဆံတော့ပါ။ ရှောင်ကျဉ်ရေးမူကို လုပ်ဆောင်မည်။
၉။ ငါတို့သည် ရဟန်းတော်များ၊ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊ ပြည်သူများကို နအဖ တို့ မတရားဖမ်းဆီးချုပ်
နှောင်ခြင်းမခံရအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကာကွယ်ကြမည်။ လွတ်မြောက်အောင် ကြံဆောင်ပေးကြမည်။ ကျန်ရစ်သော ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ ကျန်ရစ်သူမိသားစုများ ၏ စားဝတ်နေရေး၊ ပညာရေးများကို လူအားငွေအားစသည့် နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် ထောက်ပံ့ ကူညီစောင့်ရှောက်ကြမည်။
Posted by Ko Niknayman at 10:55 AM